‘सिन्धुली महोत्सवको विशेष आकर्षणमा शैक्षिक परामर्श तथा प्रविधि प्रदर्शनी’ - Living with ICT
Home / Sindhuli Edu-Tech Expo / ‘सिन्धुली महोत्सवको विशेष आकर्षणमा शैक्षिक परामर्श तथा प्रविधि प्रदर्शनी’
‘सिन्धुली महोत्सवको विशेष आकर्षणमा शैक्षिक परामर्श तथा प्रविधि प्रदर्शनी’
Shiva Basnet Dec 23, 2014	Leaveacomment
संयोजक, आइसिटी व्यवस्थापन समिति, सिन्धुली महोत्सव
तेस्रो सिन्धुली महोत्सवलाई भव्य र सभ्य बनाउन के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सिन्धुलीको आन्तरिक पर्यटन तथा उद्योग प्रवद्र्धन, कला क्षेत्रको जगेर्ना, ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी, हरिहरपुरी र जुनार क्षेत्रको विशेष प्रवद्र्धन गर्न महोत्सव आयोजना गरिएको हो । यसपटक फरक प्रयासस्वरुप जिल्लामै पहिलो पटक शैक्षिक परामर्श तथा प्रविधि प्रदर्शनी मेला तथा बृहत् राष्ट्रिय शैक्षिक तथा प्रविधि सम्मेलन (एडु–टेक कन्फ्रेन्स)हुदैछ । यसका अतिरिक्त जिल्लाका मौलिक उत्पादनहरु, फलफुल, कषि, अटोमेला, हस्तकला प्रदर्शनी तथा वित्तीय तथा अन्य सेवामूलक संस्थाहरुको सेवा तथा बाल उद्यानराखिनेछन् ।
जिल्लामै पहिलो पटक शैक्षिक तथा प्रविधि प्रदर्शनी मेला गर्दैहुनुहन्छ । मेलाको विशेष आकर्षण केके हुन् ?
सिन्धुली विद्यार्थी समाज र उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुलीको विशेष पहलमा डिजिटल सिन्धुली निर्माणार्थ पहिलो पटक एडु टेक मेला गर्दैछौं । विषेश छुटका साथ स्कुल, सहकारी, बैंकलगायतका सफ्टवयेर तथा हार्डवयर, सेक्युरटी सिस्टमहरु, सेक्युरिटी साइरनहरुको प्रदर्शनी, सरकारी कार्यलयलाई प्रविधि प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ । त्यस्तै वृहत राष्टिय शिक्षा तथा प्रविधि सम्मेलन (एडु टेक कन्फ्रेन्स),पुस १५ गते गर्दैछौं । सम्मेलनमा शिक्षा तथा प्रविधि क्षेत्रमो राष्टिय तथा अन्तराष्टिय रुपमा परिचित विज्ञहरु, शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन, हिसान, ईक्यान, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल, आइसिटी एसोसिएसनलयायतबाट प्रस्तुत गरिने अनुसन्धानमूलक कार्यपत्रमा छलफल हुनेछ ।
सिन्धुली नया बजार भएकाले केन्द्र तथा जिल्लाका कम्पनीहरु कत्तिको आउने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
प्रविधि क्षेत्रमा सिन्धुली पछि परेको र बजार व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको नाममा सूचना प्रविधिका कम्पनीहरु चाहेर पनि यहाँ आउन नसकेको अवस्था हो । यद्यपि हामीले सिन्धुलीबासीको प्रविधिप्रतिको उत्सुकता बुभेर राष्ट्रिय परिचित सफ्टवेयर र हार्डवेयर कम्पनीलाई ल्याउन प्रयास गरेका छौं । सिन्धुली भित्रकै सरकारी कार्यलहरुमा प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अनुरुपका प्रदर्शनी गर्नेछौं ।
महोत्सवको व्यवस्थापनका लाग कसरी काम गर्दैहुनुहुन्छ ? आयोजकले अवलोकनकर्ताबाट कस्तो अपेक्षा राखेको छ ?
महोत्सबलाइ सफल बनाउन स्थानीय जनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई परिचालन गरेका छौं । लागिपरेकाले सभ्य र भव्य हुनेमा आशावादी छौं । महोत्सव प्राङगणभित्र विशेष सुरक्षाका निमित्त चौविसै घण्टा सिसिभिीबाट सुरक्षा प्रदान गरिनेछ । करिब ५ लाख अवलोकनकर्ताले महोत्सव हेर्ने अनुमान आयोजकको छ ।
Previous सय डलरको एन्ड्रोइड वन नेपाली बजारमा पनि
Next सिन्धुली महोत्सवमा अवलोकनकर्ताको ओइरो
गुरु शर्मा प्रवन्ध निर्देशक, मोवाइल क्लब तपाइ लामो समयदेखि मोवाइल व्यवसायमा सम्लग्न हुनुहुन्छ । नेपालमा …
रवि फुयाल नेपाल आन्टप्रेनर्स हबका सह–संस्थापक हुन् । नेपालमा दीर्घकालीन रुपमा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्न एवम् …